Turner အာရှပစိဖိတ်အတွက် Ooyala ပါဝါအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှု, Syndication နှင့်ဖြန့်ဝေ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Turner အာရှပစိဖိတ် Ooyala အင်အားကြီးနိုင်ငံများအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး, စုစည်းခြင်းနှင့် Delivery
Turner အာရှပစိဖိတ် Ooyala အင်အားကြီးနိုင်ငံများအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး, စုစည်းခြင်းနှင့် Delivery
Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်း 85% အားဖြင့်အကြောင်းအရာထုတ်ယူခြင်းအချိန်လျှော့ချ, Turner Automate နှင့် orchestral Workflows ကူညီပေး
Ooyala အဆိုပါ Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်း, တာဝန်များကိုအလိုအလျောက်တဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် Configure လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာကွင်းဆက် optimization ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ Turner အာရှပစိဖိတ်အကြောင်းအရာစုစည်း powering သည် Workflows ရိုးရှင်းစွာနှင့် Turner များအတွက်စျေးကွက်ဖို့အချိန်အထိအမြန်နှုန်း။
ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအရာပုံစံများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူ, Turner ရဲ့နည်းပညာနှင့်စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့စုစည်း Workflows စွမ်းအင်တစ်ခုတည်းပလက်ဖောင်းလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ Turner, စီမံခန့်ခွဲထည့်သွင်းခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာအသစ်နှင့်တည်ဆဲမိတ်ဖက်ဖို့အကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူခြင်း, ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကိုချဲ့ထွင်နိုင်ရန်အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်စီမံကိန်းများသို့ သာ. ကြီးမြတ်မြင်သာရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအားလုံးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး, အကြောင်းအရာ, metadata ကိုနှင့်စီးပွားရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးသို့ပြည့်စုံမြင်ကွင်းနှင့်အတူ Turner ပေးလက်စွဲစာအုပ်တာဝန်များကိုလျှော့ချ, အချိန်ချွေတာနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုတက်လွတ်မြောက်စေဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ ဖြေရှင်းချက်မိုဃ်းတိမ်၌တပ်ဖြန့်မှုနှင့်အတူအာရှပစိဖိတ်ဒေသတလွှား Turner ရဲ့စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့များအချိန်မရွေး, နေရာမရွေးချောမွေ့စွာသုံးစွဲနိုင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။
"အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စုစည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ဖို့အကြောင်းအရာအရကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်, ပြောင်းလဲနေတဲ့-အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်" ဟုဂျိမ်းစ် Crossland နည်းပညာတက္ကသိုလ် & Operations ၏ Turner အင်တာနေရှင်နယ်ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာဒုတိယသမ္မတကပြောပါတယ်။ "ဒီ Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်း၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ခိုင်ခံ့သော orchestration စွမ်းရည်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရသိရသည် Workflows configure and အထပ်ထပ်နှင့်မလိုအပ်သောနှောင့်နှေးလျှော့ချရန်ကို manual ဖြစ်စဉ်များအလိုအလျောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ "
"ရုပ်မြင်သံကြားကုမ္ပဏီများသည်ယနေ့အကြောင်းအရာပို့ဆောင်အတွက်ရှုပ်ထွေးနှင့်အချိန်ဖိအားအရှိန်မြှင့်နှင့်အတူဆက်ဆံနေကြတယ်" ဟုယောနသန်သည် Huberman, CEO ဖြစ်သူ Ooyala ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မီဒီယာလုပ်ငန်းများချောမွေ့ရန်, သူတို့ငွေစုနှင့်ထိရောက်စွာကုန်ကျရောက်စေဖို့, Turner နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့ဝမ်းသာကြသည်။ သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များထံမှဝင်ငွေတိုးပွားလာနေချိန်တွင်အတူတကွကျနော်တို့အတူတူပင်အရင်းအမြစ်များကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများချဲ့ထွင်ပါတယ်။ "
Ooyala, software နှင့်ဗီဒီယို, ထုတ်လုပ် streaming များနှင့်ငွေဝင်များ၏ရှုပ်ထွေးရိုးရှင်းကြောင်းန်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်မှုပေးသူ, ထုတ်လုပ်မှုကနေအမြတ်အစွန်းရန်, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များအတွက်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းအရာကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်ဖို့ Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်း metadata ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်လက်ရှိစနစ်များနှင့်အတူပေါင်းစည်းရန်နှင့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များအတွက်အမှန်တရား၏တစ်ခုတည်းသောရင်းမြစ်များကိုပွင့်လင်း APIs များကို shared အလယ်ပိုင်း Workflows ပေးပါသည်။
Turner အဘို့, Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအသစ် On-Board လိုင်စင်ရှိချက်ချင်း Turner ရဲ့လက်ရှိ catalog ကနေ content တွေကိုလက်ခံရယူနိုင်အောင်လုပ်ငန်းများ၌နှင့်သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီအကြောင်းအရာကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်။ ဤသည် သာ. ကြီးမြတ်မြင်ကွင်း, ဒါပေမယ့်လည်းလျင်မြန်စွာတိုးချဲ့ဘို့အခွင့်အလမ်းမသာပေးပါသည်။
"မနက်ဖြန်ရဲ့မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကမ္ဘာကြီးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်, ကျနော်တို့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်နှင့်ချက်နဲ့ဖြစ်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာဖြေရှင်းချက်အထောက်အထား-အနာဂတ်နှင့်အရွယ်မှာဖြစ်ဖို့မြျှောလငျ့, "Crossland ကဆက်ပြောသည်။
bobgold အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
CDSA ဘုတ်အဖွဲ့ ELECTS စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သူများစုပေါင်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ - ဧပြီလ 14, 2020
နှစ်မြှုပ်ခြင်းအာရုံကြောသိပ္ပံပညာသည် Bob Gold & Associates ရှိ PR Maven များမှအနည်းငယ်သောအကူအညီဖြင့်လူတို့အမှန်တကယ်ချစ်သောအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည် - မတ်လ 2, 2020
CDSA ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကဘီစီစတီဒီယိုရဲ့လုံခြုံရေးလုံခြုံမှုအကြီးအကဲ၊ ALEX PICKERING က NEW CHAIR - ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2019
အသံလွှင့် ဖောက်သည်ပုံပြင် Ooyala OTT အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် လှံ & Arrows tecnology 2018-06-29
ယခင်: တရုတ် Blockbuster များအတွက် Rising Sun ကရုပ်ပုံများ Conjures VFX ကို Magic "တိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာ့ဖလား"
နောက်တစ်ခု: Ooyala ထပ်ပြောသည် VR360, HEVC လွှနှင့်၎င်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုပလေးအောက် Solutions ရန်အပ်ဒိတ်များနှင့်အတူ Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းရန်ပို